एनआरएनए पहिलो बैठक : सल्लाहकार र संरक्षकमा को-को ? (नामावलीसहित) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
एनआरएनए पहिलो बैठक : सल्लाहकार र संरक्षकमा को-को ? (नामावलीसहित)
access_time२०७६ साल कार्तिक ३ गते, आईतवार १२:०१ PM chat_bubble_outline Comments folder_open मुख्य खबर​ प्रवास​
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवौँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । शनिबार बेलुकी सम्पन्न बैठकले संरक्षक र सल्लाहकार चयन गरेको छ ।
पहिलो बैठकले संघको प्रमुख संरक्षकमा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई मनोनित गरिएको छ । संरक्षकहरुमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षत्रय जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन र भवन भट्ट तथा पूर्वसंरक्षक रामप्रताप थापालाई संरक्षक समितिको सदस्यको रुपमा मनोनित गरिएको छ ।
सल्लाहकारमा कुल आचार्य, सपिला राजभण्डारी, रामेश्वर शाह, टिबी कार्की, सोम सापकोटा, त्रिलोक गुरुङ, विश्वआदर्श पण्डित, पुष्प तिमिल्सेना, जमुना गुरुङ, एसी शेर्पा र हरिबोल भट्टराई चयन भएका छन् ।
त्यस्तै बैठकले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामजारको हितमा स्थापित श्रमिक कल्याणकारी कोषका लागि १ करोड ६ लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचि पदाधिकारी तथा सदस्यले उक्त रकम दिनेछन् ।
भिजिट नेपाल २०२० सफल पार्नका लागि निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको संघका उपाध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै एनआरएनएको आगामी मतदान सम्बन्धित देशबाटै गर्नका लागि उपाध्यक्ष मन केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले अध्ययन प्रतिवेदन आइसीसीमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्ति
श्रमिक कल्याणकारी कोषका लागी १ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्रदानः गैरआवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा सदस्यहरुले वैदेशिक रोजगारिमा पिडितहरुलाई सहयोग गर्ने हेतुले स्थापित श्रमिक कल्याणकारी कोषका लागि रु १ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवध्दता गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको प्रस्तावमा संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यले सो रकम दिने घोषणा गरेका हुन् । स्मरण रहोस यस कोषबाट एक निश्चित मापदण्डका आधारमा विदेशमा रोजगारीका दौरानमा पिडितहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
आज सम्पन्न बैठकले १९ वटा एजेन्डामाथि बृहत छलफल गरेको थियो । बैठकले यस अघिनै थालिएका कार्यक्रम र शुरु गरिएका पहलहरुलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकले सरकारले अघि सारेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा सहकार्य गर्नका लागि निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । यस्तै पुर्वाधार विकाशका लागि रु १० अर्बको लगानी भित्र्याउने अभियान अगाडी बढाउन अध्यक्ष कुमार पन्तको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई १ महिनाभित्र कार्य योजना प्रस्तुत गर्न बैठकले निर्णय गरेको छ ।
संघको निर्वाचन विधुतिय पद्दतीबाट प्रत्यक्ष मतदान मार्फत गर्न र निशुल्क सदस्यता बारे अध्यन गर्न उपाध्यक्ष मन केसीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ र यस समितिमा महासचिव डा. हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशी र कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ रहनु भएको छ ।
महासचिव डा. हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । विशेष महाधिवेशनले संघको संस्थागत संरचना र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन गर्नेछ। संघको काठमाडौ स्थित सचिवालयलाई चुस्त बनाउन डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।
बैठकले ५ उपाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा ५ विभाग (वैदेशिक रोजगार, परोपकारी तथा मावकल्याण, व्यवपार तथा लगानी, सिप, ज्ञान, र नबप्रवर्तन, नेपाल प्रवर्धन) निर्माण गर्ने र बिभागमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरु र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको रहने ब्यबस्था गरेको छ। एनआरएनए फाउण्डेसन स्थापना गरी सबै परोपकारी कार्यक्रम यसै फाउण्डेसन मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनआरएन विज्ञ सम्मेलनलाई निरन्तरता दिँदै दोश्रो विज्ञ सम्मेलन सन २०२० गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै संघको अगामी क्षेत्रीय सम्मेलन मध्यपूर्वमा आयोजना गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको आइजीपी बढुवा गर्न मन्त्रिपरिषद बस्दै
देशभरको मौसममा सामान्य वदली, अधिकांश क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना